Matongerwo eNyika, 06 Ndira 2020
Muvhuro 6 Ndira 2020
Ndira 06, 2020
FC Platinum Yotora Murairidzi weHighlanders De Jong
Chikwata cheFC Platinum nhasi chapa basa rehurairidzi kuna Henrik Pieter De Jong uyo aive kuHighlanders mwaka wapera.
Muzvare Marry Mubaiwa Opihwa Mukana weKubvisa Mari yeChibatiso
Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika VaConstantino Chiwenga, Muzvare Marry Mubaiwa, nhasi vapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare repamusoro reHigh Court.
Zvizvarwa zveZimbabwe Zvogunun'una neMutemo Mutsva weVapoteri Wadzikwa neSouth Africa.
Mamwe mapato anopikisa nemasangano anorwira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa ari kushora zvikuru hurumende yeSouth Africa nekudzika mutemo unonzi unoomesera vari muhupoteri.
Vari Kubuda Munyika Vokurudzirwa Kushandisa Mimwe Miganhu Kunze kweBeitbridge Border Post
Sangano rinomirira vanotenga nekutengesa kunze kwenyika, reInternational Cross-Border Traders Association, riri kukurudzira vari kushandisa miganhu kubuda munyika, zvikuru vari kubuda nekuBeitbridge, kuti vashandise mimwe miganhu isina kuwandirwa nevanhu.
Iran Inoti Yabuda Muchibvumirano Chekumbomisa Kugadzira Zvombo zve’Nuclear’
Zvichitevera kuurawa ne America kwakaitwa General Qassem Soleimani veku Iran mazuva maviri apfuura, Iran yazivisa kuti ichatsiva zvinorwadza kuurawa kwakaitwa General Soleimani avo vaionekwa semunhu wechipiri pamasimba evatongi veIran.
Varairidzi Voronga Kuramwa Mabasa Panovhurwa Zvikoro, Asi Hurumende Inoti Vambomira
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, riri kuita kongiresi yaro kubva musi wechitatu kusvika nemusi weChishanu.
Ndira 05, 2020
Kukandirana Makobvu neMatete Pakati peAmerica neIran Kwopa Kuti muMiddle East Musaite Kugadzikana
Mutumbi waGeneral Qasem Soleimani vekuIran vakaurayiwa nendege yekusora yemhando yedrone yekuAmerica pavaishanya kuIraq wasvika munyika iyi nhasi.
Hurumende Yoyedza Kugadzirisa Dambudziko reHupfu, Asi MDC Inoti NdezveMugotsi Matsuro
Gurukota rinoona nezvemaindustry Doctor Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuyedza kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwehupfu.
Ndira 04, 2020
POLAD Yonetsana neHurumende yaVaMnangagwa Pakuvandudza Bumbiro reMitemo
Paita ropa rakaipa pakati pehurumende nevamwe vePOLAD padanho rakatorwa nehurumende rekuburitsa mugwaro raro reGovernment Gazette hurongwa kwekuvandudza bumbiro remutemo.
Vamwe muAfrica Votya Kubatanidzirwa Pakunetsana kweAmerica neIran
Nyaya yekunetsana pakati peAmerica neIran mushure mekuurayiwa kwaGeneral Qassem Soleimani nemauto eAmerica yave kupa kuti vamwe mune dzimwe nyika muAfrica vatyire kuti vanogona kuzotsokodzerwa sehuswa
VaChamisa Votaura paGungano rePTUZ Vachiti Varairidzi Vapihwe Zvikwanisoro
Mutungamiri webato rinopikisa reMovement for Democratic Change VaNelson Chamisa nhasi vange vari munyarikani pagungano reCongress rerimwe sangano revarairidzi rePTUZ. Gungano iri riri paBelvedere Teachers College muHarare
Ndira 03, 2020
Kanzuru yeHarare Yotumira Mapurisa Kuzvibhorani Uko Kwombunyikidzwa Madzimai
Kanzuru yeHarare inoti yave kuronga kuendesa mapurisa ayo kuno chengetedza runyararo kuzvibhorani nedzimwe nzvimbo dzinowanika mvura uko kwave kutiika mhirizhonga pamwe nekushungurudzwa madzimai.